Dhex Dhexaadiyaasha Barcelona & PSG Ee Pini Zahavi & Kia Joorbachian Ee Heshiiska Neymar Oo Go'aan Isla Gaadhay. - Gool24.Net
Dhex Dhexaadiyaasha Barcelona & PSG Ee Pini Zahavi & Kia Joorbachian Ee Heshiiska Neymar Oo Go’aan Isla Gaadhay.
Suurtogalnimada uu Neymar jr kaga dhabayn karo riyadiisa ah in uu dib ugu soo laabto Barcelona ayaa ku socota dardar aanu hal qofna ka fikirayn intii aanu suuqa xagaagu furmin, waxaana hadda soo baxaya weerar dheeraad ah oo laga helayo wada xaajoodyada PSG iyo Barcelona.
Labada shaqsi ee kooxaha Barcelona iyo PSG u qaabilsan wada xaajoodyada Neymar Jr ee Pini Zahavi iyo Kia Joorbachian ayaa ku heshiiyay qiimaha uu xidiga reer Brazil ugu soo laaban karo Camp Nou taas oo fure u noqon karta in Neymar uu ka baxo Paris.
Markii ay PSG go’aanka ku gaadhay in Neymar Jr uu kooxdeeda ka bixi karo, waxay dul dhigeen €300 milyan yuro laakiin Barcelona ayaa u sheegtay in ayna lacagtan ku kharash garayn doonin xidiga reer Brazil.
Laakiin wargayska Sport ayaa sheegay in magacaabistii agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG ee Leonardo ay muhiimad wayn u lahayd xaalada Neymar Jr kadib markii uu mulkiilayaasha carbeed ku war galiyay in ay halis wayn tahay in xidig u magac wayn sida Neymar Jr oo aan faraxsanayn kooxda lagu sii hayo.
Leonardo ayaa maamulka kooxdiisa PSG u sheegay in Neymar Jr oo aan faraxsanayn ay kooxdooda dhibaato ku keeni karto wuxuuna u sheegay in waxa dhinac kasta u fiicani yahay in xagaagan la iibiyo iyada oo hoos looga soo degayo qiimihii markii hore la dul dhigay.
Agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo oo kooxda dib loogu soo celiyay ayaa ah mulkiilayaasha carbeed u sheegay in waxa ugu fiicani tahay in meel dhexe layskugu yimaado isaga oo waliba ka war qaba in Neymar Jr ay ka go’an tahay in uu xataa shaqo joojin samayn karo.
PSG ayaa lacag ahaan Neymar Jr ku dalban karta isla lacagtii ay kula soo wareegtay ee €222 milyan yurada ahayd laakiin Barcelona ayaa doonaysa in lacagtan inta badan ay kaga baxdo ciyaartoyda kooxdeeda kuwa ay PSG xiisaynayso.
Pini Zahavi iyo Kia Joorbachian ayaa kooxaha Barcelona iyo PSG ka caawinaya in ay isku soo dhawaadaan si heshiis looga gaadhi karo Neymar Jr waxaana jira ciyaartoy kale oo heshiiskan ku lug leh.
Ivan Rakitic oo ay PSG xagaagii hore doonaysay, Philippe Coutinho oo ay hadda PSG xiiso wayn u hayso si la mid ah Nelson Semedo ayaa dhamaantood wada xaajoodyada qayb ka ah iyada oo Samuel Umtiti uu ka mid noqon karo ciyaartoyda heshiskan lagu miisaami karo.
Barcelona ayaan doonayn in ay wax walba u samayso Neymar Jr soo laabashadiisa waxayna PSG ku cadaadinaysaa in ay hoos u soo dhigto qiimaha xidigan lagu iibsan karo iyada oo ilaa 200 milyan oo inta badan ciyaartoy loo xisaabin karo ay ku doonayaan.
Pini Zahavi oo ahaa wakiilkii ka shaqeeyay in Neymar Jr uu ku biiro PSG ayaa hadda si wayn uga shaqaynaya in uu isku soo jiido kooxaha Barcelona iyo PSG si ay markale suurtogalu noqoto in xidiga reer Brazil uu Camp Nou ku soo laabto.
PSG ayaa hadda diyaar u ah in hore loo dhamaystiro xaaladan laakiin madax waynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa doonaya in xaaladu noqoto mid ay maamuli karaan oo aan faraha ka bixin isla markaana ayna kooxdiisa ku keenin dhibaato dhaqaale.
Si kastaba ha ahaatee, Pini Zahavi iyo Kia Joorbachian ayaa isla gaadhay heshiis is afgarad oo ay ku doonayaan in PSG iyo Barcelona ay heshiis buuxa kaga gaadhaan Neymar Jr.